DAAWO-Wasiirka Keliya ee Ka Haray Musharixiintii Puntland Cabdisamad Gallan & Shaqada Ka Sugaysa Ammaanka Boosaaso iyo Buuraleeyda Bari.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa fursaddii ugu yarayd siiyey xubnihii musharixiinta ee u taagnaa xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowladda Puntland kula tartamayey.
Cabdisamad Maxamed Gallan oo kamid ahaa musharixiintii xilka madaxweynaha Puntland ayaa lagu soo daray liiska wasiirada cusub iyadoona loo magacaabay wasiirka wasaaradda amniga Puntland.
Cabdisamad Gallan oo ka soo jeeda gobolka Bari gaar ahaan beesha Cali Saleebaan ayaa soo noqday gudoomiyaha gobolka Bari xilligii Cabdiraxmaan Faroole, waxaana xurguf xoogani dhexmartay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Gallan ayaa waxaa hortaal shaqo culus oo ku aadan ammaanka gudaha iyo xuduudaha Puntland, waxaana shaqada ugu weyn uga baahan magaalada Boosaaso oo falal ammaan xumo ka dheceen dhowr jeer iyo buuraleeyda gobolka Bari oo Alshabab iyo Daacish ku dhuumaalaysanayaan.
Falo ku sabsan Xilka lo magacabay Abdisamad maxamed Galan,wasiirka wasarada Amniga puntland,malinta uu Xilka lawarego waxa lagula xisabtamaya 1OO malmood wax Qabadkisa,waxan umaleynaya in uu ka so dhalali Dono Amniga puntland,waxan huba in uu yahay nin shaqadisa ku filan,waxa laga warqaba markuu xilka hayey oo aha godomiyaha gobalka bari nin shaqadisa muuqato.